Itch.io: tsena misokatra ho an'ny lalao video miaraka amin'ny fanohanan'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Itch.io: Tsena misokatra ho an'ny lalao video miaraka amin'ny fanohanan'ny GNU / Linux
Mitohy amin'ny lohahevitry ny Lalao, fampiharana ary / na sehatra videogame mahasoa ao amin'ny GNU / Linux, hanamarinana sy hanehoana fa ny Rafitra miasa malalaka sy misokatra Mety ho ary misy, tsara ihany, tahaka ny hafa noho io tanjona io, dia hiresaka ny olana Itch.io.
Azo antoka fa mbola GNU / Linux mety ho ao aoriany Windows na MacOS amin'ny lafiny sasany, saingy matetika io dia vokatry ny tsy fahampian'ny fahalianana amin'ny sehatry ny indostrian'ny sehatry ny teknolojia na ara-barotra, toy ny lalao video, ary tsy noho ny famerana teknika an'io ankasitrahanay io GNU / Linux na tsy fisian'ny fanampiana avy amin'ny Fivondronan'ny mpamorona na mpampiasa. Ary na dia, amin'izao fotoana izao aza Windows mijanona ho mpanapaka tsy azo iadian-kevitra amin'ity faritra ity, marina ihany koa izany GNU / Linux efa lasa lavitra io faritra io.
Ohatra, ao amin'ny Avy amin'ny Linux efa niresaka betsaka momba izany isika Steam, taloha ela be momba Lutris ary tato ho ato GameHub. Ankehitriny dia anjaran'ny fampiharana lalao mahafinaritra hafa antsoina hoe Itch.io.
Mitanisa ireo mpamorona ao aminy tranokala ofisialy:
"Itch.io dia tsena misokatra ho an'ny mpamorona nomerika tsy miankina izay mifantoka amin'ny lalao video indie. Sehatra ahafahan'ny olona mivarotra ny atiny noforoniny izy io. Amin'ny maha mpivarotra anao dia ianao no miandraikitra ny fomba fanaovana azy: mametraka ny vidiny ianao, manao ny varotra ary manamboatra ny pejinao. Tsy mila mahazo vato, tiana na fanarahana mihitsy ianao raha hankatoavina ny atiny, ary afaka manova ny fomba fizaranao ny asanao matetika araka ny itiavanao azy ianao. Itch.io koa dia fitambarana sasany amin'ireo zavaboary tsy manam-paharoa, mahaliana ary mahaleo tena hitanao ao amin'ny tranonkala. Tsy trano fanatobiana nomerika mahazatra isika, misy atiny marobe, sady karama no maimaim-poana, mamporisika anao izahay hijery ny manodidina anao sy hahita izay hitanao".
1.1 Fampisehoana sehatra
1.2 Fametrahana fampiharana
1.3 Pikantsary amin'ny fampiharana
2 Solon'ny Itch.io
2.1 Ao amin'ny GNU / Linux na Multiplatforms
2.2 Momba ny Windows
Manome fitaovana ho an'ny mpamorona ny fanapahana hevitra amin'ny fomba fizarana ny atiny. Afaka mamakafaka amin'ny antsipiriany sy ny fomba ahitan'ny olona, ​​misintona na mamerina ny zavatra noforoniny ny mpamorona. Manome fidirana mora amin'ny angon-drakitra momba ny enta-mavesatra izay maneno ny ankamaroany na ny rohy manintona ny sain'ny maro.
Manamora ny fanangonan'ny mpamorona vola ny zavatra noforoniny tamin'ny fomba tsy niditra an-tsehatra. Na lehibe na bitika ny tetikasa, dia mahitsy hatrany ny fizotran'ny mpankafy na manome izay heveriny fa rariny.
Izy io dia mametraka fa ny fividianana sy ny fanomezana rehetra dia omena mihoatra ny kely indrindra. Na izany aza, ny vidiny ambany indrindra dia azo apetraka amin'ny aotra (maimaim-poana), fa amin'ny fahafahan'ny mpankafy mifidy ny hanohana ny mpamorona raha tian'izy ireo ny zavatra atolony.
Izy io dia manohana ny famandrihana mialoha, fivarotana valisoa, famoronana atiny fidirana aloha, famonosana ny atiny, ary hatramin'ny famoriam-bola amin'ny tanjon'ny tetikasa.
Sintomy amin'ny Linux ny rindranasa Linux Fizarana fampidinana.
Fanatanterahana amin'ny alàlan'ny Terminal (Console) ny fonosana alaina ao amin'ny Fampidinana fampirimana, mampiasa ny baiko: chmod +x Descarga/itch-setup && Descargas/itch-setup.
Andraso ny ampahan'ny fisintomana hisintona sy ny fanatanterahana ny interface fisoratana anarana avy eo.
Misoratra anarana amin'ny lampihazo na miditra amin'ny kaontin'ny mpampiasa anay.
Manomboka izao dia afaka mijery ny sehatra iray manontolo isika, ary mividy sy / na misintona ny lalao misy azy io.
naoty: Zava-dehibe ny mahatadidy fa nisy izany lalao maro maimaimpoana ho an'ny GNU / Linux izay azo zahana, sintonina ary milalao tsy misy olana, fidirana amin'izy ireo amin'ny fisafidianana ny marika «Linux Games".
Pikantsary amin'ny fampiharana
Ao amin'ny GNU / Linux na Multiplatforms
Momba ny Windows
Raha fintinina, ahoana no ahafahantsika mankasitraka ny Rafitra miasa GNU / Linux amin'izao fotoana izao tanteraka manan-kery na afaka milalao, lalao samy hafa kalitaon'ny sary sy haavon'ny laza, na dia tsy dia tsara toa ny ao amin'ny tolotra misy aza Windows.
Saingy, ny katalaogy amin'izao fotoana izao dia tsy hoe lehibe fotsiny fa mitohy mitombo isaky ny mandalo, in habe sy kalitao. Ary raha, ny anjaran'ny tsena an'ny GNU / Linux amin'ity faritra ity, bebe kokoa orinasa sy mpamorona dia ho liana amin'ilay sehatra tsarainay GNU / Linux ho an'ny vokatrao.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Itch.io», sehatra iray misokatra hafahafa sy fampiharana an'ny lalao, varotra ary maimaim-poana, maimaimpoana sy malalakany GNU / Linux ary ireo sehatra fandidiana hafa, dia mahaliana sy mahasoa indrindra ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Itch.io: Tsena misokatra ho an'ny lalao video miaraka amin'ny fanohanan'ny GNU / Linux
Museeks, mpilalao mozika multiplatform miorina amin'ny electron